Muva nje, NCPCVET iwine entsha izidakamizwa isitifiketi ngenxa kazwelonke lesibili isigaba esisha drugs- wezilwane "Gamithromycin" futhi "umjovo Gamithromycin."
Gamithromycin kuyinto inoveli semi zokwenziwa macrolide antibiotic. Njengamanje, tylosin futhi tilmicosin zibizwa kabanzi njengendlela macrolides. Le mithi zisetshenziselwa zokuvimbela noma zokwelapha izifo zemigudu yokuphefumula nesifo izinkomo nezingulube. Zivame ukusuthiswa izinongo noma amanzi okuphuza. Umthelela ngokuvinjelwa noma ngokwelashwa kudinga ezinsukwini eziningi zokuphatha okuphindaphindiwe. Nakuba-ke uzuze imiphumela emihle kakhulu, kodwa isandiso ukusetshenziswa isikhathi, sekube lamadigri yokumelana nomuthi obuhlukahlukene ezindaweni eziningi, nokwanda lemali ukwelashwa kancane kancane.
Umjovo we gamithromycin akhiwa NCPCVET kuyinto ukulungiselela eyenziwe ngokuxuba, prefiltering, filtration oyinyumba, futhi ukugcwaliswa aseptic. It has izinzuzo ezilandelayo: Okokuqala, iphilisi elilodwa le-ongama / umjovo kwemisipha esicutshini umjovo, umjovo owodwa ungakwazi ukuxazulula le nkinga. Eyesibili alisetshenziswa kuphela ukuvimbela izinkomo nezifo zokuphefumula, kodwa futhi umphumela ngqo izifo zokuphefumula izingulube. I wesithathu enamandla nomphumela owaqhubeka isikhathi eside, ayinayo imiphumela eseceleni lempumelelo kunamandla tylosin, tilmicosin nezinye macrolide izidakamizwa esetshenziswa kabanzi. Nelesine izinzuzo eziningi spectrum elwa namagciwane, umsebenzi enamandla elwa namagciwane, ukumuncwa okusheshayo, bioavailability okusezingeni eliphezulu, lezi zinsalela ziyavezwa ongaphakeme, ukuphepha kanye nokusebenza kahle eliphezulu.
Isicelo yimpumelelo lo mkhiqizo ngeke usize ukulungiselela isakhiwo zezimboni imikhiqizo China wezilwane izidakamizwa, eminye kuhlangatshezwane nesidingo emakethe, futhi kuthuthukise izinga lokuncintisana emakethe izidakamizwa uhambo wezilwane.
isikhathi Iposi: Jun-26-2018